Waa maxay Ilowshaha iyo Sababaha Hilmaanka Keena? |
Waa maxay Ilowshe:
Ilowhshaha waa dhibbaato saamayso dadka gaara da’a kastoo ay jiraan. Waana wax yaalaha saameeyo maskaxda iyo xasuusta.
Wakhtigaan xaadirka ah dad badan ayaa la kulma xasuusta daciifka ah sida carruurta iyo dadka waaweyn. Laakiin waaggii hore tani waxay ku koobnaan jirtay bukaanada iyo waayeelka, balse hadda waa mid caadi ka noqotay bulshada dhexdeede.
Sababaha hilmaanka keena:
1- Hurdada yarida: waa mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee hilmaanka iyo dhibaatooyinka, hurdada oo aan haysan raaxo waxay sidoo kale horseedi kartaa walaac iyo isbedel niyadda ah oo kordhiya dhibaatooyinka xasuusta.
2- Cabbida khamriga: Cabitaanka khamriga wuxuu saameyn ku yeeshaa xusuusta mudada dheera xittaa waxaan la waayi karaa qofka waxtarkiisi.
4- Qalniinka:Qalitaanka xubin jirka katirsan ayaa saameyn karta xasuusta iyo hurdada, wuxuu kaloo keenaa niyadjab, sidaas daraadeed waxa uu gacan ka geysanayaa hilmaanka qofka ku imaado.
5-Walaac iyo walwalka:Walaac iyo walwal waa dareen joogto ah oo murugo leh iyo daneyn la’aan. Waxay saameyneysaa sida aad dareemayso ama aad u fikirto una dhaqantid, waxayna ku horseedi kartaa dhibaatooyin kala duwan oo dareen iyo jir ah.
Intaan kuguda jiray diyaarinta buuggayga aan ugu magacdaray Xal iyo Xasuus waxaan raadiyay waxyaabo aad u fudud oo aad sameyn kartid si aad u hagaajisid xusuusta, waxaan soo qaatay siyaabo aan isdhahayo way caawin karaan dhalinyarada Soomaaiyeed meelwalbo oo ay dunida kaga sugan yihiin.
Tags: Waa maxay Ilowshaha iyo Sababaha Hilmaanka Keena?
Next post Hababka Ugu Horeeya ee Lagu Xoojin Karo Xasuusta Bani'aadamka!
Previous post Dhiig Baxa Ku Imaado Hooyada Xiliga Ay Uurka Leedahay!